Puntland oo dil toogasho ku xukuntay Buraale | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland oo dil toogasho ku xukuntay Buraale
Maxkamadda ciidamada dowlad goboleedka Puntland ayaa dil toogasho ku xukuntay mid kamida eedeysane xukun hore loogu riday oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab.
GAROWE, Soomaaliya - Maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ayaa dil toogasho ah ku xukuntey eedeysane horay loogu riday xukun maxkamadeed kaasoo lagu magacaabo Cabdirisaaq Axmed Buraale oo lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa Shabakaddi dilalka ee uu horjoogaha ka ahaa Maxamed Cabdi raage Indhabuur.
Buraale ayey horey Maxkamada sare ee Puntland ugu xukuntey xabsi daa'in, xukunkaas ayaa Xafiiska xeer ilaalintu ka qaatey dib-u-eegis Maxkamadeed, waxaana mar kale la hor keenay maxkamadda iyadoo lasoo bandhigay caddeymo hor leh oo muujinaya fal dambiyeedyo lagu soo oogay ninkan.
Maxkamadda ayaa ku xukuntay Buraale dil toogasho ah, kaddib markii la xaqiijiyay inuu qeyb ka ahaa shabakaddii dilalka uqaabilsaneed kooxda Al-Shabaab ee degaannada Punland, islamarkaana la xaqiijiyay inuu dil geystay.
Eedeeysanayaal ka tirsan Kooxda Al-Shabaab ayaa 14 -Jun 2021 lagu xakumay maxkamadda sare ee ciidamada Puntland, iyadoo 17 ruux oo kamida eedeysanayaasha loo haystay falal khaarajin ah lagu xukumay dil toogasho ah. Buraale ayey maxkamaddu ka reebtay waxaana lagu xakumay xabsi daa’in 14 -kii bishan.